Free BF Smart Scalper EA - Best Forex EA si | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
Nke a bụ nsụgharị nke nnwere onwe zuru ezu BF Smart Scalper ọkachamara ndụmọdụ.
Ihe niile nwere ọgụgụ isi dị mfe. BF Smart Scalper EA dị nnọọ mfe, ma ọ dabeere na ụkpụrụ kasị mma ahịa ebe ọ bụ na ahịa dị - banye ahịa na ntuziaka nke a siri ike ahịa ahịa, mgbe a na-achọpụta nduzi kwesịrị ekwesị. Na isi nke ụkpụrụ ahia a bụ nkà mmụta uche ụmụ mmadụ, nke na-agbanwe agbanwe. Ihe mgbaru ọsọ bụ ịnọgide BF Smart Scalper EA dị mfe dị ka o kwere mee iji gbochie usoro ahụ-nke kwesịrị ekwesị, nke bụ onye iro kasịnụ nke azụmahịa EA.
Free BF Smart Scalper EA Atụmatụ
Nzuzu ahia, dị ọcha ma dị mfe
24 / 5 trading, na-enweghị oge mgbochi ọ bụla - enweghị kaadị nkwụnyefe gas
Ntụziaka TP na SL dị mma
Ọkụ dị ala
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke usoro usoro - nchịkọta dị mfe ma enweghị nchekasị kwesịrị ekwesị.
Omuma oru 18 siri ike
Otutu uzo onu ahia di iche iche
Ntuziaka na aro
Ị nwere ike iji Auto MM = 2% (obere ihe ize ndụ) ruo 10% (nnukwu ihe ize ndụ), dị ka ihe akaụntụ gị pụtara na atụmanya gị na uru gị.
Ebumnuche Lot nke ziri ezi bụ 0.05 na nkwụnye ego 1k, ma ọ bụ nchịkọta 0.5 na njikwa akaụntụ 10k.
Na mmechi, ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ abụọ ụzọ abụọ, ị ga-atụle ibelata ihe o kwesiri.
Ụgwọ ego abụọ akwadoro: GBPUSD, EURUSD, USDCHF
Ntọala ndabara maka GBPUSD. Enwere ike iji robot nwere ego abụọ ọzọ.
Ị nwere ike ịgba ọsọ na EA M1 or M15 ederede - ọ dịghị ihe dị iche maka EA, dịka ihe niile e ji mee oge na-akpụ akpụ.
Ị nwere ike ịghaghachi ma bulie EA na mpịakọta M1 site na usoro "naanị ọnụahịa" - nke a ga-ezuru ma zọpụta gị ọtụtụ oge.
N'ikpeazụ, biko, buru n'uche na ndị nsọ dị nsọ anaghị adị! Ọbụna usoro kachasị mma na-enwe oge ọjọọ. BF Smart Scalper EA na-eji ezigbo ọkwa SL, ya mere, ha nwere ike ịda / ọbụna ugboro ugboro / na ọnọdụ ọjọọ.
Magic - ọnụọgụ anwansi - ọ dị oke mkpa idebe ihe a dị iche iche maka robots niile
EA_Comment - ederede ga-edobe dị ka okwu azịza
MaxSpread - kacha kwere gbasaa
Slippage - kacha nyere zufuo
StopLoss - kwusi uru ọghọm pesịniki 4-digiti bara uru - uru ezi uche dị na 30-100, opt. nzọụkwụ 5
TakeProfit - were uru dị na pips 4 digit pips - uru ezi ọrụ dị ka 5-30, opt. nzọụkwụ 1
BandPeriod - Oge Bollinger Bands - uru ezi uche dị na 5-20, opt. nzọụkwụ 1
BandBreakEntry - nkwụsịtụ na pịpeepe 4 nke akara nke BB iji bido azụmaahịa na-abụghị (uru nwere ike bụrụ nke na-adịghị mma) - uru ezi uche dị na 0-5, opt. nzọụkwụ 1
BandBreakExit - mmebi ihe nha nke pensụl 4 nke akara BB na-abụghị iji malite imechi azụmaahịa dị ugbu a (uru nwere ike adịghị njọ) - uru dị mma (-5) ruo 5, opt. nzọụkwụ 1
MA_Fast_Period - oge na-akpụ akpụ ọsọ ọsọ - ogo ezi ọrụ 1-20, opt. nzọụkwụ 1
MA_Slow_Period - oge na-agagharị oge dị nwayọ - uru dị mkpa 20-120, opt. nzọụkwụ 5
Trend_Impulse - ike dị na uru nke ahịa - ezi uche dị na ogo 0-60 opt opt. nzọụkwụ 5
MA_Trend_TF - oge nke ma MAs.
Ndabere - emeziri nza ahia mgbe AutoMM = 0.
AutoMM - njikwa ego. Dịka ọmụmaatụ, AutoMM = 5 pụtara na robot ga-ere ahịa na 5% ihe ize ndụ.